Warbixin ay warbaahinta Bulshoweyn dhawaan shaacisay oo ka dhawaajiyay Michael Keating – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Warbixin ay warbaahinta Bulshoweyn dhawaan shaacisay oo ka dhawaajiyay Michael Keating
Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating ayaa shaaca ka qaaday in dib u dhac uu ku imaan doono xilligii horey loogu qorsheeyay inay ku dhacdo doorashada xilka madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya.
Michael Keating oo wareysi siinayay barnaamijka Focus On Africa ee BBC-da ayaa dib u dhaca doorashadaasi oo qorshaheedu ahaa inay ku dhacdo 30-ka bishaan u sababeeyay in muddo 3 maalmood kaliya ay ka harsan yihiin islamarkaana aanay weli soo dhameystirmin tirada xildhibaanada ee wax dooran lahayd.
Sidoo kale, Michael Keating ayaa sheegay in doorashada Soomaaliya qiyaas ahaan ay dhici karto 15-ka December ee soo socota, waxa uuna rajo ka muujiyay in doorashadaasi ay si wanaagsan kusoo dhamaato.
Micheal Keating ayaa sheegay kahor inta aysan dhicin doorashada madaxweynaha ay dhici doonto doorashada guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa, isagoona ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu soo dhameystiro doorashada xubnaha Aqalka sare iyo Aqalka hoose, si loo sii amba-qaado doorashooyinkaas.
Dhinaca kale, warbaahinta Bulshoweyn ayaa noqotay warbaahintii ugu horeeysay oo shaacisay in dib u dhac uu ku yimid doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, kadib markii aynu xiriiro dhaw la sameeynay sarkaal ku sugan xarunta madaxtooyadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, kaas oo diiday inaynu magaciisa halkaan ka shaacino. HALKAAN KA AQRISO XOGTA HORE
Hadalkaan kasoo yeeray Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating ayaa kusoo beegmaya xilli marar badan ay dib u dhaceen doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyo tan guddoonka baarlamaanka.
Maalinta berrito ayaa la filayaa in guddiga doorashada dalka ay shaaciyaan in doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ay dib u dhacday islamarkaana la qaban doono bartamaha bisha December, iyagoona sidoo kale shaacin doonna xilliga ay dhaceeyso doorashada guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa.